Ogaden News Agency (ONA) – Kalfadhigii TPLF oo Burbur Kudhaw & Ismari Waa Kataagan.
Kalfadhigii TPLF oo Burbur Kudhaw & Ismari Waa Kataagan.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya isfahan waa aad uwayn oo mar kale soo kala dhex galay madaxda kooxda TPLF ee shirarka isdaba jooga ah ay uga socdeen magaalada Maqale.
Xog hoose oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ayaa muujinaysa in uu mar kale cirka isku shareeray khilaafkii kooxda TPLF, kadib markii xilalkoodii laga eryay qaar kamid ah saraakiisha kooxda TPLF oo ay kamid yihiin madaxwayne kusheegii Gobolka Tigrey ahaana gudoomiyihii ururka TPLF Abay Woldu iyo haweenaydii Malis Zinawi, Asaf Masfin.
Xogtan oo aan wali lacadaynin ayaa muujinaysa in qaar kamid ah xubnaha golaha dhexe ee TPLF ay kabiyo diideen xilka qaadida saraakiisha xilalkoodii laga xayuubiyay, iyo waliba sida loo bahdilay oo ay ku sheegeen si anshaxa kabaxsan.
Dhinaca kale warar aan laxaqiijinin ayaa sheegaya in madaxwaynaha Kilalka Tigreega loo dooranayo haweenay lagu magacaabo Fitlewarq Gabre Izgahaber, oo kamid ah saraakiisha ugu cad cad kooxda TPLF, taas oo sida lasheegayo xilal dhowr ah kasoo qabatay Gobolka Tigrey.
Sidoo kale xogta ayaa intaas kudaraysa in gudoomiyaha kooxda TPLF loo dooran doono ninka lagu magacaabo Alem Gabre Wahid, sidoo kale qaar kamid ah saraakiisha Tigreega ayaa lasheegayaa in ay wataan ninka lagu magacaabo Dr Adis Alem Balema.